AKHRISO: Wasiir Juxa “Waxaa maanta Puntland ehel u ah siyaasiyiin iyo dhaqan ceeriin ah” – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
AKHRISO: Wasiir Juxa “Waxaa maanta Puntland ehel u ah siyaasiyiin iyo dhaqan ceeriin ah”
January 12, 2022 Xuseen 10
Wasiirkii hore ee Arrimaha gudaha XFS Cabdi Faarax Siciid “Juxa”, ayaa sheegay in Puntland ay maanta isku heystaan siyaasiyiin iyo dhaqan ceyriin, oo qab iyo isqoonsi uu ka dhexeeyo, iyo dad doonaya in ay ka helaan wax aysan awoodin.
Cabdi Faarax Siciid “Juxa”, oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ayaa ugu baaqay Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, inuu tago magaalada Boosaaso, oo uu liqo waxyaabo kharaar, kana garamo cabashooyinka dhaqanka, siyaasadeed, iyo Amni ee miiska saaran, maadama ay Puntland ku tahay Ammaano 5 sano, loona doortay.
Halkaan hoose ka Akhriso qoraalka Wasiir Cabdi Faarax Juxa.
TANI HOOBAD KA WEYN
25 October, 2021 oo ahayd maalintii ugu horraysay ee 53 sano kadib doorashooyin hordhac ah laga sameeyey degmooyinka QARDHO, EYL iyo UFAYN, waxay Puntland gaartay meeshii ugu sarraysay magac ahaan, miisaan ahaan iyo maqaam ahaanba 23-kii sano ee ay jirtay. Waxay ahayd maalin ku suntan rajo iyo yididiilo mustaqbal.
21 iyo 24 December, 2021 oo ah maalmihii dagaalka iyo qaxu ka dhacay Bosaso-Deeqa iyo 3-dii- 5-tii January oo ah maalmihii is-casilaadda Gudiga Doorashooyinka Puntland (TPEC) waxay iyaguna ku suntan yuhiin maalmo madow oo taariikhda Puntland ku qoran. Maalmihii uu magaca, maqaamka iyo miisaanka Puntland tegey sagxadda haddaan ereygaas Wasiir Bayle ka amaahdo.
Maxaa Hoobadka intaas leeg keenay?
Is-eedayn iyo far isku fiiq wax tari maayo oo tani waa fashil wadareed. 23 sano oo xero qaniin leh iyo xeer jajab kadib Puntland derbiga ayey madaxa ku dhufatay.
Waxaa yimi ” kala dhimasho hoggaan dhaqan, kala fogaansho siyaasadeed iyo fadhiidnimo iyo wax curin la’aan Dawladnimo.”
Waxaa maanta Puntland ehel u ah siyaasiyiin iyo dhaqan ceeriin ah oo isku haysta “Qab iyo is-qoonsi” iyo “dad Saca ruqada ah (PL( ka raba wax uusan dhiiqi karin inay ka helaan keli ah.”
Mudane Madaxweyne, Dhig waxkasta oo kale oo Bosaso ka deg, sal muggiis u fariiso, laq wax badan oo kharaar oo dul-istaag tabashooyinka iyo is-diidooyinka taagan.
5 sano oo amaano reer Puntland ah ayaa ku saaran ee xal keen oo foodsaar culayska iyo cabashooyinka dhaqan, amni iyo siyaasadeed ee miiska saaran.
Wixii dhicii lahaa dhece, waxaase muhiim ah oo ku horyaal sidii loo xallin lahaa.
Ogoow marwalba inaad nagu xisaabtami kartid oo ay Puntland qof ka weyn tahay.
Update la’aan nidaam,dastuur ayaa sal u ah qaska socda sida Juxaba sheegay.
Waxa labeeya damac ashkhaas siyaasi ha ahaado amaba isimoba e.
Nidaam xooggan,ilko xoog badan oo sharci lehna ma jiraan.
Yaan layska kala tuurin nabadda wax kale lama hayee.
In xukuumadda Deni wixii oo wax qabad ahaa ay hal bacaad lagu lisay noqdaan bil gudeheed waa nasiib darro weyn.
Wixii Bosaso ka dhacay iyo is casilaadda iyo fashilka Ku yimid hanaankii dimuqraadiyahnta PL ayaa ka dhigtay khalaas.
Dani walaahi magacaagii korbuu ukacay Ilaah ayaa kula jira dadka somalida mayaqaanaan ka wax utara waba cunaan waxay jeclyihin ka dhiba oo lugooya.dadku waxaan ka soo
horjeeday qaxa dhiig dadkaas musliminta iyo fashilka puntlantaladi mashaa ALLAH taladi reer puntland madaxdoodi baad dhex dhigtay wixii xumaada shaqa kuma lihid. labada qodobo ugu horeeya qaado wixii aad uqaban kartid u qabo somali waxa tarikhda ku taal nebi ayaa loo soodiray markaas ayeey cuneen Abdirashid Ali sharmarke intu soomali u qabtay nin u qabtay waa yaryahay waan cuneen
Madaxweyne Rashiid aun soomaali ma cunin ee Majeerteen baa cunay Marka soomaali ha laga xishoodo.
Majeerteen iimaan la’aantii,qaskii ayay iskula soo noqdden ay soomaali kula dhex jireen.
Xamar ha qaraxdo inta laga shaqaynaayay ayay Bosaso ka qaraxday!!!!
Waligeedba markii Bari laga hadlo xamar waa leysku qaadi jiray xamae 1991 uu dagaal iyo qatax ka socday hawiye aana ka masula oo malinba shati xiranayay ee isbarada hakula meeraysan mj .cid hawiye ka talo iyo iiman zun maleh MAxaan Cunaa
Deni nin ka wax qabad badan Puntland ma soo marin. Lakin ninkii ugu dhowaa ayaa raba in uu fashiliyo. Cismaan Maxamuud maalin uun bay ka qoomamayn doonaan waxa ay samaynayaan.
Adeer dani waa fashilmay dagaal ayuu bosaso ku qaaday ishii puntland marka waxaan leenahay is casil intaan xafiiska lagu imaan puntland dibaad u dhigtay
Dani wuxuu qabtay ma leh inuu wareero baalamka puntland bososo deeq waxaan leenahay iscasil
Juxa waxuu u hadlay sidii saamiley siyaasi ee uma hadlin si ay ku dheehantahay wadaninimo.
Bal maxuu Deni liqaa??? Ma dulmi iyo bob hanti qaran miyuu liqaa?
Hadii uu maanta liqo bililiqadaan qaran waxaa bari khasab ku noqonaysa in u liqo mid tan kasii daran.
Yaa bari ka maalin hor istaagi kara damacayga… hadii aan cirka u kaajo oo isbaaro hor dhigto dowlada anigoo gar iyo gardaro’ba isku haleynaya taageero ah hiil iyo hoo oo aan ka helayo tolkey iyo kuwa neceb puntland.
Saasna waan sameyn karaa sababtoo ah Waxaan ka dhashay tol muruq iyo maaqaam weyn leh, oo ma jiridoonto cid damacayga guracan hor istaagi kadha.
Hadii aan cirka u kaajo… waxuu noqon ficil xumada diyaano mid la mid ah ficil dhalaan… oo aan wax lagasoo qaadin.
Caqliga saliimka ah ha shaqeeyo oo fitnada halaga hortago intey gooru goor tahay.
War arinku ma joogo Deni iyo diyaano ee dulmiga halaga hortago. Lugaha hoostooda yaan la fiirin ee foodada uu arinkaanu hor seedi karo ha la fiiriyo.
Madaama duubkii ka daray oo xaarkiisa cunay… waxaa ku haboon Deni in uu arinka hor geeyo baarlamaanka awalba xaqa u lahaa in uu go’aan ka gaaro arinkaan. Markaas kadib dowladu fuliso go’aanka kamadambeysta ah ee garsoorku ku dhawaaqo. Hadii la go’aamiyo in cadowga puntland cagta la mariyo waaba sidii la rabey.
War dadkan ad doorateen u daaya hoggaanka. Wixii taakulo ah oo siin kartaanna siiya. Dhaliishooda Baarlamaan baa u jooga, waxqabadkoodana waxaa abaalmarinteeda lagu siinayaa DOORASHADA soo socota. Dawladnimo saldhigatay hadda ma jirto, higsigu-se waa maamul xoog leh oo dadwanaha ka adag oo u xoog-sheegan kara, marka loo baahdo.
Waa inaad dadka ad doorateen ka dhicisaan KAABO-QABIILLADA jiraafada jidadka ula taagan oo ay wax ka dhaqaajin la’yihiin, oo ad makarafoonada u diiddaan.
Haddii nin oran karo xeryihii ciidamada aniga ayay hantidayda yihiin, xilna wareejin maayo, KAABO-QABIILLONA warbaahinta la soo istaagaan waa in ninkani siduu rabo loo yeelaa, haddii kale gow-iyo-gash maleh—Maxaa dadkan loo doortay oo loo yiri na hoggaamiya?
Juxa asagaa loo saadaalinaayay inu bedelo Deni,Denibaase kusoo ciyaarsiiyay Xasan Shire Abgaal,waana qalad weyn.